Qatar Airways ayaa bilaabi doonta duulimaadyada Seattle bisha Maarso
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa bilaabi doonta duulimaadyada Seattle bisha Maarso
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Jebinta Wararka Mareykanka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways ayaa ku dhawaaqday inay bilaabayso afar duulimaad todobaadle ah oo Seattle ah laga bilaabo 15-ka Maarso 2021, taasoo ka dhigeysa meeshii toddobaad ee cusub ee ay bilowdo shirkadda diyaaradaha ee Qatar illaa iyo markii uu billowday masiibada. Warkani wuxuu imanayaa iyadoo ay shirkaddu sii wado inay xoojiso isku xirkeeda adduunka oo dhan iyada oo dib u soo celinaysa duulimaadyadii, iyadoo ku dartay meelo cusub iyo ballaarinta iskaashiyadeeda istiraatiijiyadeed. Adeegga Seattle waxaa maamuli doona Qatar Airways 'qaab casri ah oo Airbus ah Airbus A350-900 oo ka kooban 36 kursi oo ah Abaalmarinta Qsuite Business Class iyo 247 kursi ee Heerka Dhaqaalaha.
Shirkadda diyaaradaha ee Qatar ayaa sidoo kale ku dhawaaqday wada shaqeyn joogto ah oo lala yeelanayo shirkadda Alaska. Laga bilaabo 15-ka Diseembar 2020, Qatar Airways Privilege Club iyo Alaska Mileage Plan xubnahoodu waxay awoodi doonaan inay kasbadaan meerayaal duulimaadyo badan laga bilaabo 31-ka Maarso 2021 xubnuhu sidoo kale waxay ku iibsan karaan maylalka duulimaadyada badan ee shabakadaha buuxa ee labada wadayaasha, iyo qiimeyn heer sare ah oo ay kujirto gelitaanka qolka. Labada shirkadood waxay sidoo kale si dhow uga shaqeynayaan sameynta heshiis codeshare iyo iskaashi ganacsi oo la jaan qaadaya duuliyaha Mareykanka mid ka midadduunka 31 Maarso 2021.
Madaxa fulinta ee Qatar Airways Group, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Qatar Airways waxaa ka go’an inay xoojiso isku xirnaanta suuqa Mareykanka, iyo bilowga duulimaadyada Seattle, oo ah meeshii labaad ee noo cusub ee Mareykanka uu tagayo tan iyo markii uu cudurkan faafay. ballanqaadkan. Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno magaalada ugu weyn Gobolka Washington madaama halkayagii todobaad ee cusub aan ku dhawaaqnay sanadkan, iyo albaabkeena kow iyo tobnaad ee Mareykanka, oo ka sarreysa tirada meelaha aan ka shaqeynay kahor-COVID19 Mareykanka. Hoy u ah warshadaha waaweyn ee teknolojiyada iyo bogga wax soosaarka, Seattle waa meel caan ku ah caalamka oo caan ku ah ganacsiga iyo socdaalka firaaqada.
“In kasta oo caqabadaha jira ee 2020, Qatar Airways ay weli ku adkeysan tahay inay baarto fursad kasta si kor loogu qaado khibradda safarka ee malaayiin rakaabkeenna ah waxayna ku faaneysaa inay iskaashi kale oo istiraatiijiyad muhiim ah ka yeelato Waqooyiga Ameerika. Duullimaadyada Alaska, waxaan la yeelan doonnaa lamaane aad u xoog badan oo aan ku xirno macaamiisha ka timaadda US West Coast ilaa Doha iyo wixii ka dambeeya iyada oo loo sii marayo xarumaheeda Los Angeles, San Francisco, iyo Seattle, annaga oo kaabi doonna iskaashiyada istiraatiijiyadeed ee jira ee ay la leeyihiin American Airlines iyo JetBlue. Waxaan rajeyneynaa inaan sii xoojino iskaashiga aan la leenahay ku soo biraha cusub ee kooxda mid ka midQoyska adduunka oo sii wadaya inay rakaabkeenna u fidiyaan adeeg la isku halleyn karo, ammaan ah oo abaalmarinno lagu helay oo ay innaga aamineen. ”
Guddoomiyaha Alaska Air Group iyo agaasimaha guud, Mr. Brad Tilden, ayaa yiri: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku soo biirno mid ka midisbahaysiga adduunka iyo in la bilaabo iskaashigan cusub shirkad diyaaradeed oo heer sare ah sida Qatar Airways. Maaddaama in badan oo naga mid ahi ay dib u bilaabayaan safarka duulimaadyada caalamiga ah sannadka dambe, waxaan ku faraxsanahay inaan u fidinno martideena adeeg cusub oo aan kala joogsi lahayn Qatar Airways oo ka timaadda Seattle ilaa Doha, marka lagu daro adeegga Doha ee ka socda xarumaheenna ku yaal Los Angeles iyo San Francisco. Wadashaqeyntani waxay u fureysaa meelo aad u fara badan oo adduunka ah iyo fursado la yaab leh oo martidayada ah. ”
Madaxweynaha Guddiga Port-Seattle, Mr. Peter Steinbrueck, ayaa yiri: “Ballanqaadkan ay sameysay Qatar Airways, in kasta oo xaaladda haatan ay ku jirto faafka, waxay caddeyn u tahay sida adduunku u arko xoogga iyo adkeysiga muddada-dheer ee gobolka Puget Sound. Tani waxay sidoo kale taageereysaa go’aanka Dekedda ee ah inay sii wado maalgashiga mashaariicda sida Xarunta Imaatinka Caalamiga ah iyo Casriyaynta Waqooyiga Satelite-ka si ay u siiso khibrad wanaagsan dadka safarka ah ee ka socda adduunka.
Rakaabka Heerka Ganacsi ee u duulaya Seattle waxay ku raaxeysan doonaan abaalmarinta abaalmarinta lagu guuleystay ee Qsuite ee fasalka ganacsiga, oo ay kujiraan albaabbo qarsoodi ah iyo ikhtiyaar loo adeegsado tilmaame 'Ha Rabin (DND)'. Qaab dhismeedka kursiga 'Qsuite' waa qaabeynta 1-2-1, oo dadka rakaabka ah siiya alaabada Noocyada Ganacsiga ee ugu ballaaran, gaarka ah, raaxada leh iyo bulsho ahaanta fog.
Duulimaadyada la bilaabayo Seattle bisha Maarso ee 2021 waxay kordhin doontaa shabakadda Qatar Airways 'US network oo ka dhigeysa 59 duulimaad toddobaadle ah oo tagaya 11 meelood oo ku yaal Mareykanka, iyadoo isku xireysa boqolaal magaalooyin Mareykan ah iyada oo loo marayo iskaashiyo istiraatiiji ah oo lala yeesho Alaska Airlines, American Airlines iyo JetBlue. Seattle waxay kubiirtay meelaha hada socdaal ee Mareykanka oo ay kujiraan Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL) , San Francisco (SFO) iyo Washington, DC (IAD).
Intii lagu gudajiray aafada, Qatar Airways waligeed ma joojin duulimaadka Mareykanka si ay ugu qaado in kabadan 260,000 oo Mareykan ah guryahooda kuwa ay jecel yihiin, iyadoo duulimaadyada Chicago iyo Dallas-Fort Worth la dayactiray mudadaas oo dhan. Duulimaadkii ugu fiicnaa ee adduunka ayaa sii waday inuu kobco oo hal-abuur sameeyo tan iyo markii uu billowday aafada iyada oo la adeegsanayo siyaasadaha tigidhada jajaban ee warshadaha horseedka u ah, tallaabooyin caafimaad iyo badbaado oo dhameystiran iyo shabakad lagu kalsoon yahay
Qatar Airways ayaa hada ka shaqeysa in kabadan 700 oo duulimaad todobaadle ah in kabadan 100 meelood oo aduunka ah. Dhamaadka Maarso 2021, Qatar Airways waxay qorsheyneysaa inay dib u dhisto shabakadeeda 126 meelood oo ay ku jiraan 20 Afrika, 11 Ameerika, 29 Aasiya-Baasifig, 38 Yurub, 13 Hindiya iyo 15 Bariga Dhexe. Magaalooyin badan ayaa loogu adeegi doonaa jadwal xoog leh oo leh maalin kasta ama ka badan mowjadaha.
Qatar Airways maalgashi istiraatiiji ah oo lagu sameeyay matoorro mataano matoor ah oo shidaal wax ku ool ah, oo ay ku jiraan kuwa ugu waaweyn ee diyaaradaha Airbus A350, ayaa awood u siisay inay sii wado duulimaadkeeda inta lagu jiro dhibaatadan oo ay si fiican u dhigto si ay u horseedo soo kabashada waarta ee safarada caalamiga ah. Diyaaraddu waxay dhowaan qaadatay seddex diyaaradood oo casri ah Airbus A350-1000, iyadoo kordhisay wadarta guud ee A350 ilaa 52 iyadoo celcelis ahaan da'da ay tahay kaliya 2.6 sano. Saamaynta COVID-19 ee baahida safarka awgeed, shirkadda waxay hakisay raxankeeda Airbus A380s maadaama aysan deegaan ahaan qiil u lahayn inay ku shaqeyso diyaarad noocaan oo kale ah oo afar engine leh suuqa hadda jira. Qatar Airways ayaa sidoo kale dhawaan soo bandhigtay barnaamij cusub oo rakaabka u suurta gelinaya inay si iskood ah u dheelitiraan qiiqa kaarboonka la xiriira safarkooda ee goobta ballansashada.
Jadwalka Duulimaadka Seattle: Isniinta, Talaadada, Arbacada iyo Jimcaha
Doha (DOH) ilaa Seattle (SEA) QR719 ayaa ambabbaxaysa: 08:00 timi: 12:20
Seattle (SEA) ilaa Doha (DOH) QR720 waxay baxaysaa: 17:05 ayaa timid: 17: 15 + 1